Removallọ ọrụ na-ewepu laser laser - China Laser ntutu mwepụ na-emepụta, Ndị na-eweta ya
1200W diode laser mwepụ igwe afọ laser enweghi mgbu Diode Laser Nwepu
1200W 755 + 808 + 1064nm na-enweghị mgbu na-ewepu ntutu mwepụ laser
1200W Ike Dị Ike
Ogwe Laser American Coherent
100 nde gbara akwụkwọ ikike
1200w Ike Ule Report
Thermostatic ọgụgụ isi Refrigeration System
Ngwurugwu na-ewepu ntutu nke na-ejikọ ọrụ kachasị na nkasi obi na-enweghị atụ. N'ihi nnukwu 4 cm2nha ntụpọ na sistemụ jụrụ oyi dị elu, ọgwụgwọ dị ugbu a karịa ọsọ ọsọ na enweghị ihe mgbu - na-enye ezigbo ọgwụgwọ dị mma maka ndị ọrịa na ndị ọkachamara. P-808 diode laser system na-eji uru elele nke ogologo jikọtara ọnụ, yana ahụmịhe nke onye ọrịa ka mma yana usoro azụmaahịa, na -emepụta ihe ọhụụ pụrụ iche na nsonaazụ ọhụụ na ụwa nke mwepụ ntutu isi.
laser maka iwepụ ntutu 755 808 1064 diode igwe
Diode laser ntutu mwepụ technology dabeere na nhọrọ Ọnọdụ nke ìhè na okpomọkụ. Igwe laser na-agabiga na akpụkpọ ahụ iji rute mgbọrọgwụ nke ntutu ntutu; ọkụ nwere ike itinye obi gị ma gbanwee n'ime ọkụ ọkụ mebiri anụ ahụ follicle ntutu isi, nke mere na ntutu isi nwughari na-enweghị mmerụ anụ ahụ gbara ya gburugburu. Ọ na-enye obere mgbu, ọrụ dị mfe, nke kachasị nchebe, teknụzụ maka ntutu mwepụ na-adịgide adịgide ugbu a.
Ọhụrụ ọkachamara na-adịgide adịgide mma salonlọ Mmanya 755 808 1064nm ntutu mwepụ laser 808 diode laser ntutu mwepụ igwe
Usoro a na - eji ogologo mwepụ ntutu kachasị mma nke 808nm diode maka ịbanye miri emi na dermis ebe ntutu isi dị. Na usoro ọgwụgwọ, usoro nke ịsụ asụsụ dị nro, nkwughachi nkwughachi dị elu na-eme ka ọnọdụ ntutu isi nke ntutu isi na nke gbara ya gburugburu dị elu, anụ ahụ na-edozi ahụ ruo ogo 45 Celsius. Nnyefe nwayọ nwayọ nwayọ na-eji chromophores n'ime anụ ahụ gbara ya gburugburu dị ka ihe nchekwa iji mee ka ntutu dị ọkụ. Nke a, tinyere ike ọkụ nke na-etinye aka na ntutu isi, na-emebi follicle ma gbochie uto.
P-mix diode laser ntutu mwepụ na Mmaji Atọ wavelength
P-808 Sistem, jiri laser pụrụ iche na ogologo Pulse-Width 808nm, nwere ike banye n'ime ntutu isi.
Iji ahọta absorption theorylaser nwere ike bụrụ ọkacha mmasị nke ọma site na ịme ntutu ntutu na ntutu isi, na-ebibi ntutu ntutu na ikuku oxygen gburugburu ntutu isi.
Mgbe ndapụta laser, sistemụ nwere teknụzụ jụrụ oyi pụrụ iche, kpoo anụ ahụ ma chebe akpụkpọ ahụ ka ọ ghara imerụ ahụ ma nweta ọgwụgwọ dị mma ma dịkwa mma.
p-mix diode laser ntutu mwepụ igwe na-adịgide adịgide ntutu mwepụ nsonaazụ
Sano Laser diode system na-eji laser pụrụ iche nwere 3 wavelengths-808nm / 755nm / 1064nm nke nwere ike ịbanye na ntutu isi. N'iji usoro nhọta ọkụ ọkụ ahọpụtara, laser nwere ike ịmasị ọkachasị site na melanin nke ntutu wee kpoo ntutu isi na ntutu isi, Ọzọkwa iji bibie ntutu ntutu na nzukọ oxygen gburugburu ntutu isi. Mgbe ndapụta laser, sistemụ nwere teknụzụ jụrụ oyi pụrụ iche, kpoo anụ ahụ ma chebe akpụkpọ ahụ ka ọ ghara imerụ ahụ ma rute ọgwụgwọ dị mma ma dịkwa mma!
N'ebe ndị mmadụ na-ekpochapu ntutu isi, Sano Laser diode laser na-apụ n'egwuregwu ahụ site na ịnye teknụzụ na-enweghị atụ maka ọgwụgwọ ngwa ngwa ngwa ngwa na nke na-enweghị mgbu.
808nm Diode laser na-adịgide adịgide igwe mwepụ igwe bụ tumadi maka ọkachamara ntutu mwepụ.
808nm semiconductor laser usoro eji ọla edo ọkọlọtọ laser na a wavelength nke 808nm. Semiconductor laser na-ewepụta ebili mmiri ọkụ dị nso-nke infrared, nke nwere ike banye n'ime miri emi n'ime mgbọrọgwụ nke ntutu isi, kpoo pigmenti dị na ya wee kesaa ya na ntutu isi dum, nke nwere ike ibibi ntutu ntutu nke ọma n'emebighị emebi anụ ahụ dị n'akụkụ ya. Iwepụ ntutu na-adịgide adịgide.
1200w 755 + 808 + 1064 laser na-ewepu igwe
Ihe nhichapụ ntutu P-MIX 755 808 1064nm Diode laser bụ tumadi maka iwepụ ntutu ọkachamara.
otutu mwepụ mwepụ, Ems Akwara mkpali Machine, Co2 Fractional Laser Machine, Shr Ipl Opt, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Ọrịa Co2 Laser,